မူလစာမျက်နှာ - အတွေးအခေါ်နှင့် Destiny နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ•ထုတ်ဝေသူများ
ထင်နှင့် Destiny ၏ထုတ်ဝေသူများ
ယခုသင်လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း-သောစာအုပ်ထဲတွင်ပါရှိသောသောသကဲ့သို့သငျဖို့အရေးကြီးတယ်သတင်းအချက်အလက်သို့ delve ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းနေကြတယ် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny Harold ဒဗလျူ Percival, အ 20th ရာစုအကြီးကျယ်ဆုံးတွေးခေါ်ရှင်တစ်ဦးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခုနစ်ဆယ်နှစျကျြောပုံနှိပ်ခုနှစ်, စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကမ်းလှမ်းအရှိဆုံးပြည့်စုံခြင်းနှင့်လေးနက်ဗျာဒိတ်တော်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤ website ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါစေရန်ဖြစ်ပါသည် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny, မစ္စတာ Percival ၏အခြားစာအုပ်များသာမကကမ္ဘာ့လူများအတွက်ရနိုင်သည်။ ဒီစာအုပ်တွေကိုအားလုံးယခုအွန်လိုင်းကိုဖတ်ရှုစေခြင်းငှါ, ငါတို့စာကြည့်တိုက်အတွက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသင်ပထမဦးဆုံးတူးဖော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny, သင်သည်စာရေးသူ၏နိဒါန်းနှင့်နိဒါန်းနှင့်စတင်လိုပေမည်။
ဒီ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည့်ဂျီ symbol မေတြီသင်္ကေတများသည်ရုပ်ပြခြင်းနှင့်ရှင်းပြထားသောအဆုံးမရှိသည့်အခြေခံမူများကိုဖော်ပြသည် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ။ ထိုအသင်္ကေတများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ။
လူသားများသည် HW Percival ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုကြည်ညိုလေးမြတ်ရန်မကြာခဏလိုလိုလားလားရှိကြောင်းသမိုင်းကပြသခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်းသူကိုယ်တိုင်သည်ဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်မခံယူလိုသောဆန္ဒပြင်းပြခဲ့သည်။ သူကထုတ်ပြန်ချက်များအတွက်မေးတယ် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကြောင်းအမှန်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ; အရှင်သူနောက်ကျောကသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူမှစာဖတ်သူကိုလှည့်:
ငါမည်သူမဆိုဟောပြောဖို့ယူဆပါတယ်မထင်သော်လည်း, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တရားကိုဟောပြောတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆရာထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်မစာအုပ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုမဟုတ်ကြကျွန်မရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးက၎င်း၏စာရေးသူအဖြစ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။ ငါသတင်းအချက်အလက်ပူဇော်ရသော ပတ်သက်. ဘာသာရပ်များ၏တန်ခိုးအာနုဘော်, သက်သာခြင်းနှင့် Self-ထင်ထဲကအကြှနျုပျကိုလွှတ်ပေးခြင်းနှင့်ကြိုးနှံ၏အသနားခံတားမြစ်ထားသည်။ ငါတိုင်းကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသောသတိနှင့်နေိုငျသောမိမိကိုယ်ကိုထူးဆန်းနှင့်တုန်လှုပ်ထုတ်ပြန်ချက်များလုပ်ဝံ့; ငါတစ်ဦးချင်းစီသတင်းအချက်အလက်များတင်ဆက်နှင့်အတူသူသို့မဟုတ်မပွုမညျဘယျသို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အခွင့်ကိုအဘို့အယူပါ။
HW Percival အကြောင်း
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစဉ်းစားပါ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny အစဉ်အဆက်မဆိုဘာသာစကားမှာထုတ်ဝေအထင်ရှားဆုံးနှင့်တန်ဖိုးရှိသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ဒါကြောင့်ယနေ့ကဲ့သို့တသောင်းနှစ်ပေါင်းယခု မှစ. လူသားတွေ့အဖြစ်စစ်မှန်တဲ့နှင့်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူတို့အား ageless စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အသိဥာဏ်ပညာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာစည်းစိမ်ဥစ္စာကြိုးစားအားထုတ်မှုများဖြစ်ကြသည်။
ရှိတ်စပီးယားအပေါငျးတို့သအသက်အရွယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါသကဲ့သို့ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏စာအုပ်။
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ကျွန်မကြာမြင့်စွာရှာဖွေခဲ့ကြသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ဒါဟာလူသားတစ်ဦး, ရှားပါး Lucid နှင့်ဖှယျ Boon ဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းအတွက် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ငါမိန်းမောတွေဝေပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နှင့်အပြင်းအထန်စိတ်ဝင်စားရှာပါ။ ဘာစာအုပ်! အသစ်ကအဘယ်အရာကို (ငါ့ထံသို့) အတှေးအကများပါဝင်သည်!
ဘယ်တော့မှမရှေ့၌၎င်း, ငါအတွင်းသို့အစဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာငါသကဲ့သို့ငါသိပ်ဉာဏ်ပညာနှင့်သစ္စာဉာဏ်အလင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါပြီ, ငါ၏အသက်ရှည်သမျှတစ်ဦး avid အမှန်တရားရှာဖွေသူပါပြီ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny.
ငါသည်ဤစာအုပ်တွင်တွေ့ရှိရသည်အထိကိုယ်ကကြီးမားတဲ့အလျင်၌ငါ့ကိုထွက်ဖြောင့်ပြီးတော့, ဒီ topsy-turvy ကမ္ဘာကိုပိုင်ပုံဘယ်တော့မှမ။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်စိတ်ဓာတ်သို့ချော်ခံစားရတိုင်းကျွန်မကျပန်းမှာစာအုပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတိအကျကြောင်းဖတ်ရှုဖို့ရာငါ့ကိုတစ်ဓာတ်လှေကားနဲ့ကျွန်မအချိန်လိုအပ်ပါတယ်ခွန်အားပေးသည်ကိုရှာပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျနော်တို့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ပုခက်ထဲကနေအပေါ်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ကြပါလျှင်မည်သို့ကွဲပြားခြားနားသောဘဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Percival ရဲ့ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ဘဝနှင့်ပတ်သက်သောတိကျမှန်ကန်သောရေးသားထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလေးနက်သောရှာဖွေသူအားရှာဖွေခြင်းကိုအဆုံးသတ်သင့်သည်။ စာရေးသူကသူပြောတာကိုသူသိတယ်ဆိုတာပြတယ်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာမရေရာသည့်ဘာသာစကားနှင့်ထင်မြင်ချက်မရှိပါ။ ဤအမျိုးအစားတွင်လုံးဝထူးခြားသည် Percival သည်သူသိသမျှကိုရေးသားခဲ့သည်။ သူသည်အခြားမည်သည့်စာရေးသူထက်မဆို ပို၍ သိသည်။ သင်မည်သူဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေခြင်း၊ စကြဝuniverseာ၏သဘောသဘာဝသို့မဟုတ်ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်တွေးမိပါက Percival သည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ပြင်ဆင်ပါ။
ဒီအစဉ်အဆက်ဒီဂြိုဟ်ရဲ့လူသိများနှင့်အမည်မသိသမိုင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အရေးကြီးဆုံးစာအုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအိုင်ဒီယာနှင့်အသိပညာအကြောင်းပြချက်မှအယူခံဝင်ဖော်ပြထားနှင့်အမှန်တရား၏ "လက်စွပ်" ရှိသည်။ HW Percival သမာသမတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါကသူ့စာပေလက်ဆောင်တွေ, ထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ်အဖြစ်လူသားတို့အားတစ်ဦးနီးပါးမသိသောလှူဒါန်းသူဖြစ်ပါတယ်။ ငါအများကြီးကျွန်မဖတ်ပြီးပါပြီများစွာလေးနက်နှင့်အရေးကြီးသောစာအုပ်ရဲ့အဆုံးမှာစာရင်းများ "ကိုဖတ်ရှုအကြံပြု" ရှိသူ၏ masterwork ၏မရှိခြင်းတို့ကအလှနျအံ့သွဖြစ်၏။ သူအကယ်စင်စစ်တဦးတည်းယောက်ျားစဉ်းစား၏ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးထားရှိမည်လျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ငါမင်္ဂလာသုခစဉ်းစားသည့်အခါတိုင်းတစ်ဦးကသာယာသောအပြုံးနှင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၏ခံစားချက်များကို Harold Waldwin Percival အဖြစ်လူတို့သညျလောကီသားတို့သည်ထင်ရှားသော, အတွင်း evoked နေကြသည်။
စိတ်ပညာ, ဒဿန, သိပ္ပံ, တက္ကဗေဒ, theosophy နှင့်ပေါက်ဘော်ဆွေမျိုးဘာသာရပ်များအပေါ်အများကြီးစာအုပ်တွေထဲကနေ copious မှတ်စုယူပြီး၏ 30 နှစ်ကြာပြီးနောက်, ဒီအံ့ဘွယ်သောစာအုပ်ငါဒီတော့နှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေနေခဲ့ကြသောသူအပေါင်းတို့သည်မှပြီးပြည့်စုံသောအဖြေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ contents တွေကိုစုပ်ယူအဖြစ်စကားလုံးများကိုဖော်ပြလို့မရပါဘူးတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းသို့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအကြီးမြတ်ဆုံး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရလဒ်များ။ ငါသည်ဤစာအုပ်အများဆုံးလိုက်စားခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲငါစာဖတ်ခြင်း၏အပျြောအပါးခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ဖော်စဉ်းစားပါ။
အစဉ်အမြဲငါဖတ်ပါအကောင်းဆုံးစာအုပ်; အလွန်လေးနက်ပြီး၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရာအားလုံးကိုရှင်းပြသည်။ ဗုဒ္ဓကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကထိုအတွေးသည်လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၏မိခင်ဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည် အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်ဤစာအုပ်ထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။